Askar ka tirsan AMISOM oo lagu xukumay dil toogasho | KEYDMEDIA ENGLISH
Askar ka tirsan AMISOM oo lagu xukumay dil toogasho
Qaar ka mid ah askartii Uganda ee lagu eedeeyay xasuuqii Agoosto 10, 2021, dad rayid beeraley ah loogu geystay Golweyn aya lagu xukumay dil toogasho ah, halka qaar kalana lagu riday xabsi muddo dheer ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxakamadeyn soo billabatay shanti bishaan, oo todobadii maalin ee la soo dhaafay ka socotay Maxkamadda AMISOM ee Xerada Xalane, ayaa maanta la soo af-meeray, waxaana xukunno kala duwan lagu riday askar ku eedeysneyd kiiska dad rayid ah oo bishii Agoosto lagu xasuuqay Shabeellaha hoose.
Labo ka mid ah shan askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM ee ka socda dalka Ugandha, oo loo heysto xasuuqii ka dhacay Golweyn, ayaa lagu xukumay dil toogasho ah, halka Saddexda kalana lagu riday 39 sano oo xukun xabsi ah.
Gudaha maxakamadda, waxaa ku sugnaa, qaar ka mid ah ehellada dadkii rayidka ahaa ee la dilay, kuwaas oo sida ay sheegeen aqbalay xukunka maxakamadda, waxayna soo dhaweeyeen in qeyb ka mid ah ciidamada Uganda, ay maxakamadda u caddeeyeen sidii wax u dhaceen.
Afhayeenka Beeralleyda Gobolka Shabeellaha hoose, Xuseen Cismaan Waasuge, wuxuu warbaahinta u sheegay in sarkaalka ugu sarreeyay ciidamada dadka laayay iyo ku xigeynkiisii lagu xukumay dil, halka saddexda kalana lagu xukumay min 39 sano oo xabsi ciidan ah.
Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, oo hore kiiskaan uga hadlay ayaa soo jeediyay in askarta ay ku caddaato in ay dilka ku lug-leeyihiin la ciqaabayo isla markaana magdhow la siinayo qoysaskii dadkooga la xasuuqay.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xl-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, oo dhankiisa hore kulan kula qaatay Muqdisho, safiirka Uganda iyo taliyaha qeybta ee AMISOM, ayaa ku wargaliyay in marnaba ay DF aqbali doonin go’aan aan caddaalad ku saleysneyn, taas oo hirgalisay tallaabada maanta la qaaday.
Dhawaan Guddi baaritaan oo ka kooban lix xubnood oo ay ku jiraan wakiillo ka socda AMISOM iyo DF ayaa xaqiijiyay in ciidamada Midowga Afrika ay mas'uul ka yihiin dhimashada todobo qof oo rayid ah, kuwaas oo Agoosto 10, 2021, lagu dilay tuulada Golweyn, oo qiyaastii 90 kiiloomitir u jirta Muqdisho.
Taasi, waxa ay suura-galisay in muddo dheer kadib, todobadkii hore la aaso meydka oo waqti dheer qaboojiye lagu yahay, isla-markaana la joojiyo bannanbaxyo joogo ahaa, oo ehellada marxuumiintu ay ka dhigayeen waddooyinka caasimadda, kadib codsi ka yimid Wasiirka Amniga Gudaha.
Ciidamada ka socda dalalka shisheeye, ayaa dilal kala duwan iyo gabood-fallo foolxun ka geysta dalka, wuxuuna kiiskaan noqonayan midkii ugu horreeyay ee si muuqata looga garaabay.